H TC Desire မှ Android 4.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း Androidsis
HTC Desire, Fallout rom ဖြင့် Android 4.03 ကိုထည့်သွင်းပါ
စာပို့ | | HTC က, ရွမ်, လဲ tutorial
a ရှိသည်သောအသုံးပြုသူများအတွက် HTC Desire မိုဘိုင်းကိရိယာဤသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို Android ပလက်ဖောင်းဖြင့်မြှင့်တင်ရန်ထွက်ရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး roms များအကြောင်းကိုကြည့်ပါ။
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက် rom ဟုခေါ်သည် ထပ်မံကျ V2.0.0 Android 4.0 Ice Cream Sandwich ပါ ၀ င်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် rom ကို install လုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရပ်ဖစ်ရှုထောင့်အသစ်နှင့် ၄.၀ သာကန့်သတ်ထားသောယခုမိုဘိုင်းဖုန်းဟောင်းများသို့ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ဂရပ်ဖစ်ရှုထောင့်အသစ်နှင့်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ standalone roms.
အဆိုပါ rom တစ် ဦး အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ် HTC အခြေပြု 1.56.401.2, Android 4.03 ကို run ။ Kernel Stock 3.0.16 ဖြင့် Rom ဖြစ်ခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သောကြောင့်ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကိုမထိခိုက်စေဘဲပရိုဆက်ဆာကိုတင်းမာစေခြင်းမရှိဘဲလျင်မြန်မှု၊
HTC Desire အတွက် Rom တွင်နာမည်ကျော် HTC Sense 4.0၊ အမြစ်နှင့်စူပါအသုံးပြုသူအတွက်ခွင့်ပြုချက်များ၊ ဖန်တီးသူမှထပ်ဆင့်တင်ထားသော Tweaks များ၊ မတူညီသောဖိုင်များမှကာကွယ်ရန် Ad Blocker၊ Bash၊ taskbar မှတောက်ပမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် Launcher ဖန်သားပြင်အမျိုးမျိုးတို့ပါဝင်သည်။ မော်ဒယ်များ 3,57 သို့မဟုတ်9။
Rom နှင့်သဟဇာတမဖြစ်သည့်အပျက်သဘောဆောင်သောအချက်မှာ WiFi Hotspot လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Android 4.0 သည်အရာအားလုံးနှင့်အတူ HTC Desire သို့လွတ်လပ်သော rom အသစ်ဖြင့်မိုဘိုင်းကိုအရောင်နှင့်စိတ်ကြိုက်ရှုထောင့်များပေးစွမ်းနိုင်သည်။
El တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် Rom ကို download ချခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ထို့နောက် zip ကို (unzipping မပါဘဲ) memory card သို့ယူသွားသည်။ USB Debugging option ကိုဖွင့်ထားပြီးတပ်ဆင်စဉ်ပြduringနာမရှိအောင်ဘက်ထရီပမာဏအမြင့်ဆုံးသေချာအောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့်လက်ကိုင်ဖုန်းမှာပြcauseနာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်အမြဲတမ်းဘက်ထရီပမာဏကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။
Rom ကို Recovery mode မှတပ်ဆင်ထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC Desire ကိုပိတ်ပြီး volume down key နှင့် power key ကိုဖိထားပြီးဖွင့်ပါ။ Volume Down Key ဖြင့် Recovery ကိုသွားပြီးအောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ဒေတာအားလုံးကိုဖျက်သည် / မူလစက်ရုံထုတ်အနေအထားပြန်လည်ရယူသည်
အဆင့်မြင့် / dalvik cache ကိုသုတ်ပါ
Internal sdcard မှ zip ကိုရွေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် rom ၏ဇစ်ကိုသွားသည်
တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ HTC Desire တွင် Android 4.03 ရှိသည် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ၏အင်အားအရှိဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်း၏အမြင်အာရုံပုံစံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင့်အားမှန်ကန်သော rom ရှိပါကမခက်ခဲပါ၊ Androidsis မှသင့်ကိုအကောင်းဆုံး update update ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါမည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Remics-UX သည် Samsung Galaxy S အတွက်အကောင်းဆုံး rom ဖြစ်သည်
link - HTCMania
Download - ထပ်မံကျ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » လဲ tutorial » ရွမ် » HTC Desire, Fallout rom ဖြင့် Android 4.03 ကိုထည့်သွင်းပါ
30 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဤ ROM သည် "ဂန္ထဝင်" Desire အတွက်မဟုတ်ဘဲ HTC Desire S အတွက်ဖြစ်ကြောင်းသင်သိခဲ့ပြီ။
HTC Desire ၏အမှု၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤအရာရှိသည် - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1355660 AOSP ဖြစ်ခြင်း။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ! ^^
မင်္ဂလာပါ။ မေးခွန်းတစ်ခုကဤ rom သည် HTC Desire အတွက်အသုံးဝင်ပါသလားကျေးဇူးတင်ပါသည်
၎င်းသည်လူများသည် Lia ဖြစ်ကြောင်း Desire S၊ Desire no အတွက်သတ်မှတ်ထားသည်
HTC အလိုရှိ Se ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ ၄.၄ --.- … .. ယခုအများပြည်သူထံတောင်းလျှောက်သည်… HTC HTC CLASSIC အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုရှိပါသလား။ HTC အလိုဆန္ဒ ... ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် roms ခေါင်းစဉ်နှင့်အသစ်ဖြစ်နေပါသည်၊ ဤအရာကို install လုပ်ရန်သင်သည်မိုဘိုင်းကို root လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
Bootloader ကိုဖွင့်ပြီး clockworkmod recovery ကို install လုပ်ရပါမယ်
ငါ့လူမျိုးကောငျး။ ကြာရှည်စွာရှာဖွေပြီးနောက်၎င်းတို့သည်သူတို့လိုချင်သောအရာကိုရှာရန် HTC (HTC အလိုဆန္ဒ) ROM ကို SuperOSR v1.4.0 ဟုခေါ်သည်။ ဒီမှာငါများစွာသောအားဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်ဓာတ်ပုံကိုချန်ထားသည်
။ အိုကေ။ ကျွန်ုပ်၏ Desireeeeeeeeeeeeeee ကိုမွမ်းမံပါ
ဒါပေမယ့် htc bravo အတွက်တရားဝင်ပါသလား။
Rom ကိုကျွန်တော် install လုပ်လို့မရပါဘူး၊ စက်ရုံအခြေအနေပြန်ရောက်တာပါ
သင့်မှာ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပြီးပြုပြင်ထားသော Recovery ကို install လုပ်ထားပါသလား။
Ariel araya bonilla ဟုသူကပြောသည်
အထက်ဖော်ပြပါအဆင့်တွေကိုအတိအကျလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဖုန်းကမဖွင့်ဘူး၊ အစိမ်းရောင်စာလုံးတွေပါတဲ့အဖြူရောင်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်၊ ​​HTC က "အဲဒီကမှမဖြစ်ဘူး" ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ? ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းသည် AT&T HTC Inspire 4g ဖြစ်သည်
Ariel Araya Bonilla သို့စာပြန်ပါ
ငါနဲ့ဖုန်းတူညီတဲ့အခက်အခဲလည်းအတူတူပဲ၊ မျက်နှာပြင်အဖြူထက်ကျော်လွန်နေတယ်၊ ​​ကျေးဇူးပြုပြီးသင်ဖြေရှင်းပုံကိုပြောပြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ် Inspire 4G တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ ငါကြိုးစားခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အစိမ်းရောင်လိုဂိုနှင့်အတူအဖြူရောင်ဖန်သားပြင်တွင်ရှိနေပြီးရှေ့သို့မရွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မှားယွင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ်ဤမော်ဒယ်က၎င်းကိုမထောက်ပံ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုရယူသောအခါ၊ အားလုံးအဆင်ပြေပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါ htc ကကျွန်ုပ်အားစတင်သည်၊ ဖုန်းအိုင်ကွန်နှင့်အတူအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်ကဲ့ရဲ့သံကိုကျွန်ုပ်ရရှိသည်၊ ပြီးတော့ငါထွက်မထွက်သွားဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့ဒီတစ်စုံတစ် ဦး ကိုဖြစ်ရတာလဲလို့သင်ရှင်းပြနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jaime ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ ငါမင်းနဲ့မျက်နှာချင်းတူတူပဲ။ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိလား။
မင်းအတွက်ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြီလဲလို့ငါ့ကိုစိတ်ထဲမှတ်မိလား။ ငါ့အီးမေးလ်က paluco80@gmail.com ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ rom ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ reboot လုပ်ပြီးသောအခါ HTC ဟုပြောသောအစိမ်းရောင်အက္ခရာများနှင့်အတူအဖြူရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသလား။ ငါဘာအမှားလုပ်နေတာလဲ
ဟေး !!!! အရမ်းလိုချင်လား HD လိုချင်လားဟင်? ဗွီဒီယိုထဲမှာပြသထားတဲ့ bug တွေမရှိဘူး ???
Jony Ziade အဆိုပါ Jawiche ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပစ်ပါရန် Wipe data / factory reset တွင်ဖော်ပြပါ ???
Jony Ziade El Jawiche အားပြန်ပြောပါ
22/10/2012 06:14 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
recovey သို့ rebooting လုပ်ခြင်းသည် privile လုပ်ထားသော command များကို run ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်။ အဲဒါဘာလဲ? ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
Rom Manager ကို Rom Manager ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် HTC Desire HD / Inspire HD အတွက် DDD ကိုလည်းလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ခွေးမသည်ယခုလွန်ခဲ့သည့်အဖြေက q alguin စာလုံးကို HTC နှင့်အတူအဖြူရောင်မျက်နှာပြင်ထဲကမလာပါဘူး: @@@@
Rom Manager ကိုသတိထားပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်သင်၏ဖုန်းကိုအသုံးမကျအောင်ပြုလုပ်နိုင်သော program တစ်ခုဖြစ်သည်
ဒီ rom htc အလိုဆန္ဒ (htc bravo) အတွက်တရားဝင်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
ဘယ်မှာငါအခန်းကို download လုပ်ပါ
ငါမှာ htc desire vision ရှိတယ်။ ငါစဖွင့်တုန်းကဖန်သားပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေလှမ်းအားလုံးကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ htc အက္ခရာများနှင့်အတူအလွတ်သွားပြီးမစတင်ပါဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ကောင်းပြီ၊ အားလုံးအဆင်ပြေစွာသွားနေသော်လည်းရွေးစရာကိုမတွေ့ပါ။ - Dalvik cache ကိုအဆင့်မြင့် / သုတ်ခြင်းပြီးလျှင်ဆဲလ်မှအရာအားလုံးကိုသာဖျက်ပစ်သည်။
android 4.2 ကို htc desire A8182 တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။
Carlos T ကိုပြန်ပြောပါ
Windows7မှာ Android SDK ကိုဘယ်လို Install မလဲ
Nyko သည် Android ဂိမ်းအတွက် Controller အသစ်များကိုပြင်ဆင်သည်